Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka (GMDQ – GMDQ
Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka (GMDQ
ee uu hogamaaniyey Guddoomiye ku xigeenka guddiga M/ne, Sayid Ali Sheik Maxamed ayaa safar shaqo ku tagay Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya (KGS) gaar ahaan magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meelgaarka ah maamulkaasi, maalintI Axadda ee taariikhdu ku beegnayd 17/12/2017.
Ujeedada safarkaas ayaa ahaa wadatashiyo dadweyne ee uu guddigu ka sameynaayey dhammaan dowlad goboleedyada dalka si loo helo aragti mideysan oo ku aadan doorashada qof iyo cod ee 2020 iyo in dadweynaha talooyin ku soo biiriyaan sidii looga gudbi lahaa caqabadaha ku horgudban doorashada loogana yeesho talo qaran. Wafdiga ayaa ku sugnaa magaalada Bauydhabo afar casho halkaasoo oo ay ugu suurtagashay kulamo is xigxiga in ay kula yeeshaan siyaasiyiinta, xildhibaanada, aqoonyahanka, dhalinyarada, haweenka iyo dadweynaha kale ee deegaankaas.
KULANKA MADAXWEYNAHA KOONFUR GALBEED
Ugu horreyn, guddoomiye ku xigeeenka guddiga M/ne, Sayid Ali Sheik Maxamed iyo Kommishanki wafdiga la socday ayaa la kulamay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya M/ne, Shariif Xassan Sheikh Aadan ayagoo u sharxay ujeedada safarkooda iyo qorshayaasha u degsan geedi-socodka kulumada wadatashiga dadweynaha. Waxay kaloo faahfaahin ka siiyeen inta ay joogaan magaalada jadwalkooda shaqo iyo qaababka qaabilaadooda dadweynaha.
Madaxweynaha ayaa wafdiga ku soo dhaweeyey magaalada Baydhaba wuxuuna u sharxay xaaladda dhaqan dhaqaale, siyaasadeed iyo midda bulsho ee magaalada Baydhabo. Wafdiga iyo madaxweynaha waxay isla garteen muhiimadda wadatashigan uu u leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed oo weligoodba raadin jiray sidii ay mar uun u arki lahaayeen doorasho qof iyo cod ah oo ka hirgesha dalka.
DAAHFURKA KULUMADA WADTASHIGA DADWEYNAHA
GMDQ maalintii xigtay ee isniinta oo ku beegnayd 18/12/2017 uu ka bilaabay geedi-socodka wadatashiyada dadweynaha magaalada Baydhabo. Waxaa kulamadaasi daahfuray Guddoomiyaha Baarlamaanka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya (DGKGS) M/ne, Abdulkadir Shariif Sheekhuna Maye, oo guddiga ku soo dhaweeyey ugana mahadceliyey ku bilaabidda geedi-socodkan maamulkooda.
Wuxuuna sheegay in uu aad ugu kalsoon yahay in shacabka koonfur galbeed soo dhaeynayaan diyaarna u yihiin in ay taladooda ku biiriyaan doorashada 2020.
Waxaa sidoo kale munaasabaddas daahfurka hadallo kooban ka jeediyey Guddoomiye ku xigeenka guddiga M/ne, Sayid Ali Sheik Mohamed oo faahfaahin ka siiyey jadwalka kulamada taxanaha ah ee geedi-socodka wadatashiyada dadweynaha ee magaalada Baydhabo.
Waxaa asagna soo dhaweeyey Madaxa Malaaqyada Koonfur Galbeed Soomaaiya Malaaq Deerow—– oo carabka ku adkeeyey in ay aad u soo dhaweynayaan in ay xilka ku wareejiyaan haddey yihiin oday dhaqameedyada maamulkaasi, maadaama ay eeedo faro badan iyo dilal ay kala kulmeen kooxaha nidaam diidka iyo nabad diidkaba. Haddana ay ajaanis u tahay in guddiga ku wareejiyaan howshaasi.
KULANKA ODAY DHAQAMEEDKA
Guddigu wuxuu kaloo kulan la qaatay oday dhaqameedyada, cuqaasha iyo culumu -awdiinka magaalada baydhaba maalinta talaadada oo ay taariikhdu ku beegnayd 19/12/2017.
Kulankaas oo daba jooga kulamadii wadartashi ga dadweyne ee guddigu waday oo ahaa mid la isku dhaafsanaayey talooyin muhiim u ah doorashooyinka iyo sida looga gudbi karo caqabadaha doorashda 2020 ayaa odayaasha iyo culumada su’aalo ku saabsan doorashooyinka ku weydiiyeen wafdiga.
Ugu danbeyn, odayaasha iyo culumada ayaa soo dhaweeyey geedi-socdka wadatashiyada gaar ahaan iyo guud ahan doorashada qof iuo cod ay ku rajo weyn yihiin in dadkooda daga Koonfur Galbeed ay tiro ahaan ku kalsoon yihiin in xaqooda ku heli karaan.
KULANKA HAWEENKA & DHALINYARADA
Intii uu guddigu joogay magaalada Baydhabo waxa uu kulan la qaatay haweenka magaaladaasi kuwaas oo si heer sare ah uga soo qeybgalay geedi-scodka wadatashiga dadweynaha ee doorashada 2020.
Haweenka magaalada Baydhabo ayaa aragtidooda iyo talooyinkooda ku biiriyey wadatashigan, waxayna muujiyeen in ay doorashada qof iyo cod soo dhaweynayaan ayna fursad u tahay haweenka oo markii hore aan lahayn oday dhaqameed u soo xula xildhibaannimada.
KULANKII SIYAASIYIINTA & AQOONYAHANKA
Guddigu wuxuu kulan la qaatay siyaasiyiinta, xilidhibaanada iyo aqoonyahanka magaalada Baydhaba maalinta Arbacada ee taariikhdu ku beegnayd 20/12/2017. Kulankaas ayaa ku dhacay jawi aad u fiican iyadoo siyaasiyiintu iyo xildhibaanadu su’aalo badan ka weydiiyey guddiga qorshaha fog guddiga oo ku wajahan doorashda qof iyo cod sanadka 2020ka.
Ugu danbeyn, waxaa su’aaalaha ka jawaabay guddoomiye ku xigeenka iyo commissinka, halka kuwii aan laga jawaabin loo qaatay talo ahaan.
Safarkii guddiga ku joogay magaalada Baydhabo ayaa ujeedadaiisu aheyd geedi-socodka wadatashiga dadweynaha ee doorashada qof iyo cod ee 2020. Howlahaas shaqo ayaa ku qabsoomay si heer sare ah iyadoo dhmmaaan wadatashigii suurtagalay, dadkuna ay ku soo biiriyeen aragtiyo iyo talooyin muhiim u ah doorashada taasoo lagu soo bandhigi doono warbixinta guud ee xog ururinta.
Waxaa la faafiyey January 7, 2018 August 16, 2018